Singapore-based Impunity Esports signed All-Myanmar PUBG Mobile Team – Gaming Noodle
မြန်မာ PUBG Mobile အသင်းကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ စင်ကာပူ အခြေစိုက် Impunity Esports
Impunity Esports ဟာ မနေ့က သူတို့အသင်းရဲ့တရားဝင် Facebook page ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄ ယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PUBG Mobile အသင်းကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Impunity PUBG Mobile Myanmar
Impunity Esports ဆိုတာ စင်ကာပူအခြေစိုက် Esports အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် ဂျာမဏီ ဘောလုံးကလပ်ဒေါ့မွန် ရဲ့ ဒေသတွင်းပါတနာအဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Impunity Esports မှာ ယခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ PUBG Mobile အသင်းအပြင် CSGO, LOL, Fortnite နဲ့ Vainglory အသင်းတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ Impunity Esports ရဲ့ Vainglory အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် နံပါတ် (၄)နေရာကို ၂ နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတာပါ။
Impunity Vainglory Singapore
2018 ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ စတင်ပြုလုပ်နေတဲ့ Impunity Esports အသင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လခန့်က မြန်မာကစားသမားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CSGO အသင်းတစ်သင်းကိုလည်း ခေါ်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ Impunity CSGO အသင်းဟာလည်း လက်ရှိမှာလည်း အောင်မြင်မှုများစွာရရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့အတွက် ဒုတိယမြောက် မြန်မာအသင်းအဖြစ် PUBG Mobile အသင်းကို ဆက်လက်ခေါ်ယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Synnex Myanmar Game Show 2019 CSGO Champion Impunity Esports
Impunity PUBG Mobile အသင်းဟာ မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ 3rd American Trade Show PUBG Mobile Tournament မှာ အဆင့် (၉) ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ Samsung Galaxy Challenge 2019 မှာလည်း Semi-final အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ Semi-final အဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Main Event Final မှာ Impunity PUBG Mobile အသင်းရဲ့ ကစားပုံတွေကို အပြင်မှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကမ္ဘာနဲ့အညီ တရှိန်ထိုးတိုးတက်လာတဲ့ Electronic Sports (Esports) trend ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ အများအပြား စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ 2019 နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ မြန်မာ Dota2 အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Veterans အသင်းကို အိန္ဒိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Reckoning Esports ကလည်း စာချုပ်ချုပ်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း Impunity Esports ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Esports အခန်းကဏ္ဍကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမျိုးကိုလည်း ထပ်မံမျှော်လင့်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။
မွနျမာ PUBG Mobile အသငျးကိုချေါယူခဲ့တဲ့ စငျကာပူ အခွစေိုကျ Impunity Esports
Impunity Esports ဟာ မနကေ့ သူတို့အသငျးရဲ့တရားဝငျ Facebook page ကနပွေီးတော့ မွနျမာနိုငျငံသား ၄ ယောကျနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ PUBG Mobile အသငျးကို ကွညောခဲ့ပါတယျ။
Impunity Esports ဆိုတာ စငျကာပူအခွစေိုကျ Esports အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈပွီး ကမ်ဘာကြျော ဂြာမဏီ ဘောလုံးကလပျ ဒေါ့မှနျ ရဲ့ ဒသေတှငျးပါတနာအဖှဲ့အစညျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ Impunity Esports မှာ ယခုဖှဲ့စညျးလိုကျတဲ့ PUBG Mobile အသငျးအပွငျ CSGO, LOL, Fortnite နဲ့ Vainglory အသငျးတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။ Impunity Esports ရဲ့ Vainglory အသငျးဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ နံပါတျ (၄) နရောကို ၂ နှဈဆကျတိုကျရရှိတဲ့အထိ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတာပါ။
2018 ခုနှဈကတညျးက မွနျမာနိုငျငံမှာ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှေ စတငျပွုလုပျနတေဲ့ Impunity Esports အသငျးဟာ လှနျခဲ့တဲ့ခွောကျလခနျ့က မွနျမာကစားသမားမြားနဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ CSGO အသငျးတဈသငျးကိုလညျး ချေါယူခဲ့ပါသေးတယျ။ Impunity CSGO အသငျးဟာလညျး လကျရှိမှာလညျး အောငျမွငျမှုမြားစှာရရှိနပွေီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျသီးအသငျးတဈသငျးအဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့အတှကျ ဒုတိယမွောကျ မွနျမာအသငျးအဖွဈ PUBG Mobile အသငျးကို ဆကျလကျချေါယူခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Impunity PUBG Mobile အသငျးဟာ မကွာသေးမီက ကငျြးပခဲ့တဲ့ 3rd American Trade Show PUBG Mobile Tournament မှာ အဆငျ့ (၉) ရရှိခဲ့ပွီး လကျရှိကငျြးပနတေဲ့ Samsung Galaxy Challenge 2019 မှာလညျး Semi-final အဆငျ့ကိုရောကျရှိနပေါပွီ။ Semi-final အဆငျ့ကို ဖွတျကြျောနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ Main Event Final မှာ Impunity PUBG Mobile အသငျးရဲ့ ကစားပုံတှကေို အပွငျမှာ ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျအတှငျး ကမ်ဘာနဲ့အညီ တရှိနျထိုးတိုးတကျလာတဲ့ Electronic Sports (Esports) trend ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံကို နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှေ အမြားအပွား စတငျဝငျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ 2019 နှဈဆနျးပိုငျးမှာ မွနျမာ Dota2 အသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ Veterans အသငျးကို အိန်ဒိယအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ Reckoning Esports ကလညျး စာခြုပျခြုပျချေါယူခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာလညျး Impunity Esports ကဲ့သို့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ Esports အခနျးကဏ်ဍကိုမွှငျ့တငျပေးမယျ့ နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွုပျနှံမှုမြိုးကိုလညျး ထပျမံမြှျောလငျ့နပေါတယျ ခငျဗြာ။
Impunity Esports recently announced from their official Facebook page that they signed new PUBG Mobile team which is formed by four Burmese players.
Impunity Esports isaSingaporean organization which is also the regional partner of world-renowned German football club, Borussia Dortmund. Apart from PUBG Mobile, Impunity Esports has LOL, Fortnite, CSGO and Vainglory teams. Among them, their Vainglory team has the highest achievement with global rank (4) for two consecutive years.
Impunity Esports started their investment in Myanmar talents since 2018 and they also signed five Burmese players for their CSGO division earlier this year. Impunity CSGO had crowned many local tournaments after the acquisition and they now stand asatop CSGO team in Myanmar. That could be the reason why Impunity is expanding their second Esports team in Myanmar.
Impunity PUBG Mobile recently placed 9th in 3rd American Trade Show PUBG Mobile Tournament. They also advanced into semi-final stage of Samsung Galaxy Challenge 2019, the biggest local PUBG Mobile tournament so far. They need to prove themselves and fight their way to bookaticket to LAN finals.
Since last year, Myanmar Esports industry has been booming and caught the eyes of many foreign investors. Earlier this year,aMyanmar Dota2team “Veterans” was signed by Indian organization “Reckoning Esports” and now the players are bootcamping at Mumbai. Like Impunity and Reckoning esports, we welcome other foreign investment which can develop Myanmar Esports community and buildacareer for Esports enthusiasts.
Source : Impunity website & Facebook
#Impunity #Esports #Singapore #Myanmar #PUBGMobile #CSGO